တ​ကြောင်းစာစု ၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Celebrity » တ​ကြောင်းစာစု ၂	12
Posted by ムラカミ on Mar 3, 2015 in Celebrity, Drama, Essays.., Members, My Dear Diary | 12 comments
အလွန်​အင်​မတန်​ အကျီးတန်​လှေ​သော အား​ဆေးဗူး​စောင့်​ သယဲမကြီး မွတဲပြာသည်​ ကြည့်​မြင်​တိုင်​ကမ်းနားလမ်းရှိ ဓတ်​ဆီ​ရောင်း​ကီလားများ ​သေးပန်း​လေ့ရှိသည့်​ ကြက်​ဆူပင်​ကြီး​ပေါ်တွင်​ ဇဘင်​ဖားယား ထမီရင်​ရှားနှင့်​ ငုတ်​တုတ်​ထိုင်​သန်းတုပ်​ရင်း အီတာလျံ​ဘောလုံးသမားရုပ်​ရည်​ရှိသည့်​ ​မောင်​ဂီ​လေးအား ဂုတ်​ချိုးရန်​​ ​အကုသိုလ်​တသိန်း အဘိဇာ အနန်​တ နှင့်​ ​သန်းေ​ခောါင်ယံ့တ်ွင်​ တင့်​တယ်​စွာ ​စောင့်​​မျှော်​​နေ​လေ့ရှိသည်​
မွသဲ ( 17082011 ) says: &$**%***%#$&***$&#@@@&*$&$**&$$** #%*#$&&%#&*$@%&& မောထှာ *$#-&%@**&* @&*$&&#**$#:-$# #*&#&*&%& ရွစိ
Ma Ma says: တကြောင်းစာစုအတွက် ညွသဲရဲ့ တကြောင်းကွန်မန့် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဒါပေမယ့် ဖွတ်ထက်တော့လှမယ်ထင့်
Wow says: ကွကိုယ်သေကြောင်းကြံနေပါတဲ့ ဖား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: နင် လွန် ဘီ နော်
မွသဲ ( 17082011 ) says: My Sweet Where are you? Come back soon.
Alinsett@Maung Thura says: ဟှာ…. တီသဲ ပြောသွားတာက…တယဲဂျဂါးလား…
black chaw says: မြန်မာစာပေ လောက အတွက်
သိသာ ထင် ရှားသော
တိုးတက်မှု ဟု ထင် မြင် မိသည်။
စကားလုံး ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ဖြင့်
မြန်မာစာ အ ရေးအသား
စာရေးသူ မောင် ဖွတ်ကျား အ နေဖြင့်
တစ်ခြားသော ရေးဖေါ် ရေးဘက်များကို
နောက်ထပ်လည်း တစ်ကြောင်းဝတ္ထု များဖြင့်
စမ်းသစ်သော တီထွင် မှု အတွက်
အမျိုးသားစာပေဆု ချီးမြှင့် သင့် သည်။
(အ ပျော်ပါ ဗျာ)
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: လက်​ဦးဆြာ ဦးဇင်းကြီး ဘတ်​ဒန်​တ ဂန်းနာဝါစက ဘီလီဘီလီဘလက်​ဘလက်​ရဲ့ သင်​ပြမှု​ကောင်းလို့ပါခီညာ
မြစပဲရိုး says: အရူး ဘုံမြှောက်။
naywoon ni says: ​ကြောင်​ ပြီး​တော့ ဖား ကျန်​​သေးတာကိုး ။ ​
############# ​တွေ​တောက်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4010
manawphyulay says: တစ်ကြောင်းထဲနဲ့ လက်ညောင်းခံပြီး ရေးမနေပါနဲ့… အများကြီး ပြောတာတောင် ဘာမှဖြစ်မလာတာ။ တစ်ကြောင်းထဲပြောမယ်ဆို အပိုတွေ ဖြစ်ကုန်မယ်…